Adeegii Qaliinka Iyo Daawaynta Indhaha Ee Bilaashka Ahaa Oo Ka Furmay Cusbitaalka Gootaa-biki - Cakaara News
Adeegii Qaliinka Iyo Daawaynta Indhaha Ee Bilaashka Ahaa Oo Ka Furmay Cusbitaalka Gootaa-biki
Gootaa-biki(Cakaaranews) Jumce 21ka July 2017. Waxaa si rasmi ah ooga furmay cusbitaalka wayn Ee Degmada goota-biki ee gobolka siti ololihii Daawaynta Iyo Qaliinka Indhaha ee bilaashka ahaa Oo Ay Kafaa,iidaysanayaan shacabka Degmada gootaa-biki iyo nawaaxigeeda ee gobolka siti. Oo uu qorshuhu yahay in looga faaiideeyo dhamaan ba bulshada ku dhaqan nawaaxigaas ee wax ka qaba indhaha.
Hadaba Hogaamiyaha kooxdan wareegta ee qalitaanka indhaha iyo daawaynta bilaashka ah ee DDSI mudane Cabdulaahi Xambali ayaa sheegay in uu adeegani Bilaashka ah ee qaliinka iyo daawaynta indhaha ee caafimaadka DDSI uu ka bilaabmay cusbitaalka wayn ee degmada gootaa-biki islamarkaana looga faaiidayn doono bulsha aad tira badan oo isugu jira qaliin, daawayn iyo muraayadaha araga saxa. Iyadoo wakhti xaadirkana lagu jiro tijaabadii hore ee qof walba sida uu wax ooga qabo indhaha lagu ogaan lahaa iyo waliba qalitaankii. Wuxuuna intaa ku daray inuu adeegan qaliinka iyo daawaynta indhaha bilaashka ah uu maalmahan kasii socon doono cusbitaalka degmada gootaa-biki ee gobolka sitti.
Dhanka kale waxaa isana dhankiisa ka hadlay kusimaha gudoomiyaha degmada gootaa-biki mudane Cabdishakuur Sheekh Maxamed oo sheegay inuu adeegani yahay mid muhiim ah islamarkaan uu muhiim uyahay bulshada danyarta ah, Wuxuuna masuulku intaa kudaray inay wargeliyeen dhamaan bulshada ku dhaqan gootaa-biki iyo naawixgeedaba.
Ugudanbayna waxaa dhankooda ka hadlay qaar kamid bulshada aragooda dib uhelay ee ku dhaqan degmada gootaa-biki iyo naawaaxigeeda oo u waramay warbaahinta deegaanka ayaa sheegay inay aad oogu faraxsanyihiin qalitaankan iyo daawaynta indhaha bilaashka ah ee loo sameeyay islamarkaana bogaadiyay howshan caafimaad ee ay bulshadu dib oogu helayaan aragooda indho. Waxayna aad oogu mahad celiyeen xukuumada DDSI oo runtii dadaal dheer ugashay siday bulshada deegaanku uheli lahaayeen aragooda indhaha.